Xiisad weli ka taagan Degmada Beled Xaawo | Dhacdo
Home Wararka Maanta Xiisad weli ka taagan Degmada Beled Xaawo
Xiisad weli ka taagan Degmada Beled Xaawo
Hanjabaadda xilligan ka soo yeertay Wasiirka Amniga Jubbaland, Cabdirashiid Xasan Cabdinuur (Janan) ayaa baqdin ku dhalisay shacabka ku dhaqan Degmada Beled Xaawo ee Gobolka Gedo.
Wasiirka ayaa muuqaal uu soo duubay waxaa uu ku sheegay inay markale weerari doonaan Degmada Beled Xaawo, isla-markaana aysan degmadaasi uga tanaasuli doonin Dowlada Federaalka.
Wasiirka ayaa yiri “Waxaan u maleynayaa 2011-kii bishii 3-aad, 5-teedii baa waxaan Beled Xaawo ka qabanay Ururka Al Shabaab oo haystay. Dagaal laba jeeraa ku jabnay, kii saddexaadaa ku qabanay. Waxaan hubaa kuwa aan ka qabanay dadnimo, sharaf iyo ammaano, intaba inay uga fiican yihiin Farmaajo iyo kooxdiisa, waan hubaa. Waan hubaa taas iyada ah, wax shaki ah iigama jiro. Marka talo guracan ama gumeysi gaara ama Qaranimo Soomaaliyeed oo leesla ogolyahay wax ka duwan oo dano gaar ah, haddaan u deyneyno, Al Shabaab baa u deyn lahayn Buulo Xaawo iyo Jubbaland degmooyinkeeda. Ma aqbaleyno, mana dhaceyso in nin qurbajooge ah oo basaboor wato oo dalka u soo doontay xil, saacadduu xilka waayana tagaya inaan deegaanadeenii, dalkayagii, Dowlad Goboleedkeenii, calankayagii iyo astaanta gaarka noo ahayd ee ummadda Soomaaliyeed wax kula darsanay uu diido, oo aan ka aqbalno, ugana tagno deegaanadeenii, marnaba ma dhaceyso.”
Axmed Buule Maxamed (Canjeex), Gudoomiyaha Gobolka Gedo ee garabka Dowladda Federaalka oo ka falceliyay hadalka Wasiir Janan ayaa sheegay in dadka ay u hanjabayaan isaga iyo Korneyl Cabaas Ibraahim Gurey ay dadkoodii uun yihiin.
“Nimanka meesha ka hadlay ee Cabdirashiid iyo Cabaas Ibraahim Gurey waxaa weeye hooyooyinkooda iyo walaalahood ayaa degan Beled Xaawo, waxay u dhaaranayaana waa walaalahood, hooyooyinkooda iyo shacabkooda weeye, waa dadkii la dhashay ee ka soo jeedeen weeye waxay u dhaaranayaan. Marka toban bilood bay is abaabulayeen, waxa ay keeneyna waxay ahayd inay labaatan qof oo shacab oo masaakiin ah dilaan.” Ayuu yiri Gudoomiyaha oo la hadlay VOA.
Gudoomiyaha ayaa qeexay inay heegan ugu jiraan sidii ay isaga difaaci lahaayen weerar kasta oo kaga yimaada ciidamada uu hoggaamiyo Wasiir Janan, walow uu sheegay inaanay ahayn dad xilligan dib iska soo abaabuli kara.
“Heegan iyo wax walbaan ugu jirnaa, mana fillaayo dad hadda isa soo abaabuli kara inay yihiin, waa iska waxaa weeye dadka yeysan tagin iyo wax cabsi gelin ah.” Ayuu yiri Gudoomiyaha.
Gudoomiye Canjeex ayaa intaa ku daray “Dadweynaha Beled Xaawo dad hadda waxaas loogu hanjabi karo maaha, muuqaal la soo duubayna dad ku yaacaayana maaha. Dad waxaa weeye xuduudoodii inta la dhistay oo Dowladda Kenya ay damacday inay silig mariso, Soomaali intaa u qaylinayay diiday in darbi la mariyo dhulkoodii weeye dadka meesha degan.”
Si kastaba ha-ahaatee dadka reer Beled Xaawo ayaa ku sheegaya inay si dhab ah u qaateen hanjabaadda ka soo yeertay ciidamada uu Wasiir Janan hoggaamiyo ee ku sugan Degmada Mandhera.
Previous articleShabaab oo awaamiir layaab leh ku soo rogay ganacsatada xoolaha Beledweyne
Next articleJubbaland oo ka falcelisay shirka uu ku baaqay Madaxweyne Farmaajo